Wadahadallada nabada Suuriya oo dib uga furmaya Vienna - BBC News Somali
Wadahadallada nabada Suuriya oo dib uga furmaya Vienna
Image caption Wadahadalada Suuriya
Wareeg cusub oo ah wadahadallada nabadda ee Suuriiya oo ay garwadeen ka tahay Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in maanta lagu qabto magaalada Vienna.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee waddanka Faransiiska, Jean-Yves Le Drian, ayaa sheegay in wadahadalku uu ka dhigan yahay rajadii ugu dambaysay ee xal siyaasadeed loogaga gaarayo colaadda Suuriya.
Kulanka Vienna ayaa waxa uu imanayaa maalma un ka hor kulan kale oo uu soo qabanqaabiyay Ruushka oo baritaaro Madaxweyne Bashaar Al-Assad, kaas oo lagu qaban doono magaalada Sochi looguna magac daray shirweynaha nabadda ee Suuriya.
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee waddanka Suuriya, Staffan de Mistura, oo hadlayay ka hor wadahadallada ayaa sheegay in la joogo waqti xasaasi ah.
Waxa uu sheegay in dowladda Suuriya iyo mucaaradkaba ay wufuud dhameystiran u soo dirayaan shirka.
Hasayeeshee kaddib sideed wareeg oo wadahadallo ah ayaanay dowladda iyo kooxaha fallaagada weli isku soo hor fariisan waji ka waji.
Ciidammada dowladda Suuriya oo ay taageeraan Ruushka iyo Iiraan ayaa tan iyo 2015 waxa ay dib uga qabsadeen fallaagada dhul ballaaran oo dalka ku yaal.
Maadaama uu milateri ahaan uu leeyahay gacanta sare ayaa Madaxweyne Assad waxa uu u muuqanayaa inuusan doonayn inuu wax wadaxaajood ah galo iskaba daa inuu xilka ka dego ee taas oo ah shardi ay dalbanayeen kooxaha fallaagada.
Dowladda Ruushka ayaa iyana waxa ay todobaadka soo socda magaalada Sochi ku qabanaysaa shirweyne looga hadli doono nabadda Suuriya.
Qaar ka mid ah diblumaasiyiinta Reer Galbeedka iyo Carabta ayaa rumaysan in Moscow ay doonayso inay shir kale ka garab furto midka ay Qaramada Midoobay waddo si ay u curyaamiso hannaankaasi.
Bilowgii todobaadkan wasiiradda arrimaha dibadda ee Britain, Faransiiska, Urdun, Sucuudi Carabiya iyo Mareykanka, ayaa waxa ay ku kulmeen magaalada Paris si ay uga wadahadlaan taageeridda wadahadallada nabadda ee ay Qaramada Midoobay garwadeenka ka tahay.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee waddanka Faransiiska, Jean-Yves Le Drian, ayaa sheegay in xalka kaliya ee siyaasadeed uu ku iman karo wadahadallada nabadda ee ay hogaaminayso Qaramada Midoobay, kaas oo uu ku tilmaamay inuu yahay rajadii ugu dambaysay.